China DP inoshandura DP kusvika kuDVI inoshandura inotsigira 1080p vagadziri uye vatengesi |Wellink
Iyo DP inoshandura ndeyepamusoro-tsanangudzo yekuteerera uye vhidhiyo inoshandura iyo inoshandura DP yekubuda mudziyo kuita DVI interface, ndiko kuti, inogona kushandura chiratidzo chekombuta uye mudziyo une DP interface kuita DVI chiratidzo chinobuda.Imba yeiyi shanduko inogadzirwa nepamusoro-simba ABS zvinhu.Chitarisiko chiri nyore uye chinoyevedza.
DVI MUKADZI 1080p
High-kuchena okisijeni-isina mhangura musimboti
Batanidza iyo DP interface mudziyo kune DVI interface yekuratidzira mudziyo
DP vhidhiyo yekuisa fomati: 480I/576I/480P/576P/720P/1080I/1080P/60HZ
DVI inobuda sarudzo: 480I/576I/480P/576P/720P/1080I/60HZ
* Tsigira imwe DP interface yekupinda uye imwe DVI interface inobuda;
COMPACT DESIGN - Iyo inotakurika Moread DP kune DVI adapta inobatanidza desktop kana laptop neDisplay Port (DP, DisplayPort++, DP++) chiteshi kune chekutarisa, kuratidza, purojekita, kana HDTV ine DVI yekuisa;Tuck iyi gajeti isingaremi mubhegi rako kana muhomwe kuita bhizinesi mharidzo, kana kuwedzera nzvimbo yako yekushandira kuti uwedzere kubereka;DVI tambo inodiwa (inotengeswa zvakasiyana)
INCREDIBLE PERFORMANCE - Iyo DisplayPort yechirume kuDVI inoshandura yechikadzi inotsigira mavhidhiyo resolution kusvika 1920x1080@60Hz (1080p Yakazara HD) / 1920x1200 uye PC graphics resolution kusvika 2048x1152@60Hz;Ndarama yakaputirwa DP yekubatanidza inopesana nekuora uye abrasion uye inovandudza kufambisa kwechiratidzo chekufambisa;Molded strain relief inowedzera kusimba kwetambo
SUPERIOR STABILITY - DisplayPort yekuvhara yekubatanidza ine latches inodzivirira kubviswa netsaona, uye inopa kubatana kwakachengeteka;Bhatani rekuburitsa paDisplayPort yekubatanidza rinofanira kudzvanywa risati raburitsa;HAISI inoshandura bi-directional uye haigone kufambisa masaini kubva kuDVI kuenda kuDisplayPort
BROAD COMPATIBILITY - Iyo DisplayPort kune DVI-D dongle inoenderana neDisplayPort ine komputa, pc, notebook, ultrabook, HP, Lenovo, Dell, ASUS;Gadzirisa yekutarisa kuMirror Mode kuti idzokorore kuratidzwa kwekutanga kwevhidhiyo kutenderera kana kutamba;Gadzirisa yekutarisa kuKuwedzera Mode kuti uwedzere desktop nzvimbo
1 Gore W
Bare mhangura conductor uye foil & braid shielding inopa ese epamusoro tambo kuita uye yakavimbika yekubatanidza
Midziyo yekupinda: Signal masosi ane DP yekubuda interface, senge makomputa uye zvimwe zvishandiso zvine DP interface, nezvimwe.
Mubvunzo:Iyi adapta dvi-d single link inoenderana here?
Mhinduro:I dont know for sure.Unogona kubata zvakawanda wovabvunza kuti vanopindura nekukurumidza.Cable yemhando yakanaka futi.Ndakashandisa tambo nekuti ndakanga ndisina magumo evhidhiyo kadhi rangu.
Mubvunzo:Adapter iyi inoda kuti mutyairi aiswe here?
Mhinduro:Kwete.Kubatana kwenyama.Haidi chero madhiraivha anopfuura ako akajairwa kadhi kadhi madhiraivha.
Mubvunzo:Iyi iadapter inongoshanda here kana kuti inoshanda?
Mubvunzo:Izvi zvichatsigira 1920 x 1080 pa144hz?
Mhinduro:Inotsigira zvigadziriso zvinosvika 1920x1080@60Hz.
Mubvunzo:Ndine pc ine dvi kunze uye mamonitor matsva ane displayport mukati. Izvi zvichashanda kushandura dvi kuita displayport?
Mhinduro:Kwete. Ichi HACHISI chishanduri chebi-directional uye HAZVINOGONA kushandura masiginecha kubva kuDVI kuenda kuDisplayPort.
Zvakapfuura: 10 mu1 Type-C HUB,USB3.0,Type-C PD 100w,VGA(1080P), 3.5mm Audio ye macbook
Zvinotevera: mini DP kune HDMI inoshandura